Saraakiil ka tirsan Booliiska Mareykanka oo la dilay+Sawirro – Radio Muqdisho
Saraakiil ka tirsan Booliiska Mareykanka oo la dilay+Sawirro
Shan ka mid ah saraakiisha booliiska magaalada Dallas ee gobolka Taxis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu diley toogasho xilli halkaasi ay ka socdeen dibad baxyo ka dhan ah dilka nin ka mid ah dadka madow oo booliiska ay dileen sida ay sheegeen saraakiisha.
Sidoo kale dhowr ka mid ah saraakiisha booliiska ayaa weerarka ku dhaawacmay sida uu sheegay madaxa booliiska ee Dallas David Brown.
” Waxaa socda baaritaan xoog leh oo lagu baadi goobayo kuwa la tuhunsan yahay” , ayuu yir taliyaha booliiska Dallas David Brown.
Xaaladda ayaa ah mid wali aan xasilooneyn iyadoo wararka ay intaa ku darayaan in booliiska ay sawireen mid ka mid ah kuwa la tuhunsan yahay oo wali la raadineyo.
Rabshadahan ayaa ka dambeeyay markii ciidanka booliiska ay dileen Philando Castile oo lagu diley Minnesota iyo Alton Sterling oo isana booliiska ay ku dileen Louisiana.
Dibad baxyada Dallas ka dhacay ayaa qeyb ka ah banan baxyo laga dhigay guud ahaan Mareykanka oo looga soo hor jeedo dilalka ciidanka booliiska ay u geysanayaan dadka madow oo asalkooda Afrika ka soo jeedo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dhammaan dadka maskaxda fiyow leh ay walaac ku heyso dilalka isdaba joogga ah oo loo geysto dadka madow.
Wasiirka xanaanada xoolaha oo Talyaaniga kula kulmay madaxa he’yada FAO-Sawirro
R/wasaare Cumar oo Adis ababa kula kulmay dhiggiisa dalka Ethiopia